‘Inaan guursaday nin naafo ah ayaan dhib kula kulmay’ |
‘Inaan guursaday nin naafo ah ayaan dhib kula kulmay’
Haweeney u dhalatay Kenya oo uu guursaday nin naafo ah oo u dhashay Australia ayaa BBC-da u sheegtay in dadka ay ku tilmaameen qof lacag darteed sidaas u sameysay, kaddib markii ay sawirradeeda soo galisay baraha bulshada.
Susan Njogu Eling ayaa sheegtay in dadku ay si kale u fasirteen jacaylka ay u qabto Philip Eling, iyagoo aan ogeyn in waligeedba ay caawin jirtay dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Waxay u tagtay dalka Australia si ay uga barato la shaqeynta dadka naafada ah, iyadoo jaamacadda ka qaadatay shahaaha dibloomada oo ay markii dambe shaqo uga raadsatay shirkadda uu leeyahay Mr Elling.
Mr Eling ayaa ka codsaday in ay xiriir yeeshaan kaddib markii uu ka qaaday wareysiga shaqada, waxayna markii dambe noqdeen dad is jecel.
“Jacaylkeenna waa mid ka dhashay aragtidii ugu horreysay. Wax dhib ah kuma aanan qabin xaaladdiisa, sababtoo ah waxaan xiriir lasoo yeeshay dad badan oo naafo ah intii aan waxbarashada ku jiray,” ayey tidhi.
Lamaanahan ayaa faraantiga isu galiyay lix bilood kaddib, waxaana qorshaha guurkooda aqbalay gabadha waalidiinteeda.
Susan Njogu ElingCopyright: Susan Njogu Eling
Waxay ugu dambeyn sameysteen aroos sawirradiisa lagu shaaciyay baraha bulshada, dad badanna ay ka fal celiyeen.
“Dadku waxay sheegeen in sababta kaliya ee aan u guursaday ninkan ay tahay inaan lacagtiisa rabo, laakiin waxaad mooddaa inaan fal-celintaas ka filayay. Waan u diyaarsadaa hadal noocaasoo kale ah, wax dhib ahna iima geysanin. Waxaan ku qanacsanaa in midowgeenna uu ahaa mid uu Ilaah qorsheeyay,” ayey tidhi.
Hadda oo ay u dabaaldagayaan sanad guuradii saddexaad ee arooskooda, Mrs Eling waxay sheegtay in ay aad isugu faraxsan yihiin.